“အတွေးစလေးတွေ”: ထုံးအိုးထမ်းမယ့် ဦးဟန်ကြည် . . .
ထုံးအိုးထမ်းမယ့် ဦးဟန်ကြည် . . .
လက်ကျန်နည်းနေသဟာကြောင့် အွန်လိုင်းပေါ် တက်သင့်မတက်သင့် ချိန်ဆနေလင့်သော်ငြားလည်း ဘလော့ဂါမည်သည် အဘယ်အကြောင်းကြောင့်မှ ဘလော့ဂင်းခြင်းကို မစွန့်ရာဟု ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် အလုပ်မပို့ပိုအောင် ချမှတ်ထားမိပေထသော မဟာ့မဟာ သံဓိဋ္ဌာန်တော်ကြောင့် မဖြစ်ဖြစ်သည့်နည်းဖြစ့် ပို့စ်သစ်တင်အံ့ဟု စိတ်ရည်သန်လျှက် ဘလော့ဂါတို့ ဘိုင်ကျသောအခါ လုပ်လေ့လုပ်ထရှိသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို အပြည့်အ၀ လိုက်နာပြီးသကာလ နုတ်ပက်ဟု သညာပေးအပ်သော စာရေးကဒ်ကို ဖွင့်ပြီးလျှင် ဇော်ဂျီဖောင့်ဟု အမည်သညာတွင်ပေထသော လွန်စွာမှ ရှေးကျလှသည့် အင်တာနက်သုံး မြန်မာစာစနစ်ဖြင့် ပို့အသစ်တစ်ခုကို မဖြစ်ဖြစ်အောင် ဖြစ်ညှစ်ရေးထုတ်ပြီး ကော်ပီအင်ကတ် စနစ်ကို ကျင့်သုံး၍ အင်တာနက်ပေါ်တွင် ငါးမိနစ်ခန့်သာ အချိန်ကြာအောင် ဥာဏ်နီဥာဏ်နက်မျိုးစုံထုတ်ပြီး ဤပို့စ်အသစ်က်ိုဖတ်သူစိတ်ညစ်အောင် တင်လိုက်ပြန်ပါချေသည် စာရှုသူ။
သင်ရိုးညွှန်းတန်းစာအုပ်ပေါင်းစုံကို စီစဉ်ရေးထုတ်နေမင့်ကြောင့် အားလပ်ချိန်ဟူ၍ စိုးစဉ်းမျှပင် မရှိရာ ဘီယာစုတ်ချိန်ပင် စဉ်းငယ်မျှ မရလင့်ကစား ဘ၀ဘ၀က ပါရမီဟု အမည်ကောင်းတပ်အံ့သော မရေးရမနေနိုင်သည့် ၀ဋ်ကြွေးကြောင့် အချိန်ရှိသမျှ ဘလော့ဂင်းရန်အတွက်သာ အားသန်နေပြန်သည်ကလည်း မံမံပန်းကန် မှောက်အောင် ကလူကျီစယ်သကဲ့သို့ ရှိပြန်ချေသည် တမုံ့။ ပသို့ပင်ဆိုစေ ဆိုရေးရှိက ဆိုအပ်စွဟူသော ရှေးသူဟောင်းတို့ ထုံးဟောင်းကို အင်တာနက်ခေတ်နှင့် လိုက်လျောညီထွေအောင် ရေးရေးရှိက ရေးအပ်စွဟု ကိုယ့်တရားကိုယ်စီရင် အသစ်ပြင်ပြီးလျှင် ရင်ထဲစိတ်ထဲတွင် အခဲမကျေအောင်ဖြစ်နေပါသော အနှီအကျိတ်၊ အဖု၊ အစိုင်၊ အခဲကို နည်းနည်းပင်ပြေသော်လည်း ခံသာရာ၏ဟု ယူဆပြီးလျှင် ကြားဖူးနားဝ ပုံဟောင်းတစ်ပုဒ်ကို ထုတ်နုတ်တင်ဆက်မိပြန်ပါပေ၏။
အတီတေ ရှေးအခါက စာရေးသားရာတွင် ကွန်ပြူတာဟု အမည်တွင်ပေထသော သိုးဆောင်းဘုတ်အုတ်ကလည်း မပေါ်သေးရုံသာမက၊ ပေါက်ဖော်ကြီးတို့ စီစဉ်ဖန်တီးအပ်သော စက္ကူမည်သည့် အရွက်ပါးပါးကလည်း မြင်ကာမျှပင် မမြင်ဖူးသေးသည်ဖြစ်ရာ ဖွတ်ကလိဒင်္ဂါး ပြားပြားမှမကုန်ပဲ အလကားမတ်တင်းဖြင့် ပေပင်ပေါ်တက်ခူးလျှင် ရစကောင်းသော ပေရွက်ပေါ်တွင် ကညစ်ဟု အနွတ္တသညာတွင်ပေထသော သံချွန်ဖြင့် စာပေတို့ကို သက်တောင့်သက်သာ မရှိလှစွာ ရေးသားရသည် ဟူသတတ်။ အနှီကာလတွင် အညာကျေးလက် ဘဂ၀ါဟိုက်စကူးခေါ် ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းမှ ပဉ္စင်းငယ်တစ်ပါးသည် စာချဆရာတော်ထံ ချဉ်းကပ်ပြီးလျှင် မိမိသီကုံးစပ်ဆိုထားသော ပါဠိဂါဌာတစ်ပုဒ်ကို သဒ္ဒါနည်းကျမကျ၊ ဖွဲ့ထုံးမှန်မမှန် စစ်ဆေးပေးပါရန် တောင်းပန်လေသတတ်။ အကယ်တည့် အနှီဂါဌာတွင် အမှားတစ်လုံးတစ်လေ ပါရှိငြားလျှင် အနီးရှိ ထုံးအိုးထဲမှ ထုံးဖြင့် အသာအယာတို့၍မှတ်သားပေးပါကြောင်း ထပ်လောင်း၍ မေတ္တာရပ်ခံပြီးလျှင် ထိုပဉ္စင်းပျိုလည်း သင့်ရာနေရာသို့ဖယ်ခွာသွားလေ၏။ အချိန်အတန်လင့်လတ်သော် ထိုပဉ္စင်းပျိုလည်း စာချဆရာတော်ထံသို့ ပြန်လည်ချဉ်းကပ်ပြီးလျှင် မိမိ၏ပေမူအကြောင်းကို မေးမြန်းသည်ဟူ၏။ ထိုရောအခါ ဆရာတော်ပြန်ဖြေသည်မှာကား “အို... ပါဠိပါဋ္ဌ်သားအရာတွင် သူမတူအောင် တစ်ဖက်ကမ်းခတ် ကျွမ်းကျင်ပေထသော မောင်ပဉ္စင်း...။ မောင်ပဉ္စင်း၏ ပေမူကို ငါဆရာစစ်ရာတွင် အမှားတစ်လုံးတွေ့သကာလ ထုံးဖြင့်တို့ရင်း စစ်လေရာ ထုံးတို့၍ပင် မနိုင်အောင် ဖြစ်ရလေသောကြောင့် မောင်ပဉ္စင်း၏ ပေမူကို ပသို့ပြုရမည်ပင် မဆုံးဖြတ်တတ်လေတော့ရာ အနှီထုံးအိုးထဲတွင်သာ နှစ်ထားလိုက်ရချေသည် တမုံ့” ဟု မျက်နှာတော်နီနီဖြင့် မိန့်လေသောကြောင့် ပဉ္စင်းပျိုလည်း ထုံးအိုးထဲကို လက်အသာနှိုက်ပြီးလျှင် မိမိ၏ပေမူကို အသာအယာယူ၍ ဝေးရာသို့ ပြေးရှာရလေသတတ်။
အနှီပုံပြင်ကို ပုလုကွေးအရွယ် ငယ်ကတည်းက ကြားဖူးပင်ကြားဖူးငြားသော်လည်း ကျောင်းစာမှတပါး အပြင်စာများကို ဉာဏ်မကစားအားလောက်အောင် ဖိစီးပေထသော ရွှေပြည်ကြီး၏ မဟာပညာရေးစနစ်ကြောင့် လောက်လောက်လားလား နားလည်ခံစားမိခြင်းမရှိဘဲ တဟဲဟဲနှင့် သွားဖြဲနားဖြဲ ရယ်ရုံသာ တတ်နိုင်ခဲ့ချေသည်တမုံ့။ ပသို့ဆိုစေ နေ့ကိုလစား၊ လကိုနှစ်စား၊ ရွှေပြည်၏စီးပွားကို လူနပ်တို့စား၊ မော်ဒယ်ဂဲလ်ကို အန်ကယ်တို့စား၊ တကျွတ်ကျွတ်ညံသော စုတ်သပ်သံကို ဖွတ်ကြောပြာစုတို့ စားရင်းဖြင့် အရွယ်တော် တစ်ဆိတ်ဟိုင်း၍ နှစ်ဆယ်ကျော် အစိတ်ပိုင်းကို နှစ်ခါပင်ဝင်လုလေမှ အနှီပုံပြင်ကို ဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ခြင်မိရတော့ချေရာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပင် လွန်စွာမှ နှစ်ထောင်းအားရဖြစ်မိပြီးလျှင် ကျည်ပွေ့ဖြင့်ငယ်ထိပ်ကိုနှက်ချင်လောက်အောင် ကြည်ညိုမိရချေတော့သည်။
လူသားဟူသမျှ အမှားနှင့်မကင်းနိုင်လေရာ တစ်ရက်တစ်ရက်မှားသမျှ ထုံးတို့၍သာ မှတ်သားထားရလျှင် လူတစ်ကိုယ်လုံး ထုံးပဒေသာဖြစ်ပြီး အ၀တ်အစားဝတ်ရန်ပင် လိုအံ့မထင်သောကြောင့် ဖွတ်ကလိဒင်္ဂါးအကုန်အကျ အတန်ပင်သက်သာချေမည်ဟု မဟာ့မဟာ အကြံကြီး ဖြစ်ပေါ်လာရပြန်ချေတော့သည်။ သို့ပင်သော်ငြား အသူက အသူ့ကို စစ်ဆေးပေးအံ့နည်းဟူသည့် မဟာပြဿနာတော်ကြီး တစ်ရပ်လည်း ပေါ်လာရပြန်ချေတော့သည်။ အဘယ်သကောင့်သားတွင် သူတပါးကို စစ်ဆေးပေးအံ့သော အရည်အချင်းသည် ပြည့်စုံအံ့နည်းဟူသည်ကိုလည်း ဖြူပြီးဖြစ်သော ခေါင်းထက်ကဆံပင် သုံးလေးပင်အကျွတ်ခံ၍ စဉ်းစားပါငြားကပဲ ခွေးတစ်ကောင်၊ ကြောင်တစ်မြီးမှပင် မမြင်ပြန်လေ။
ကလိယုဂ်ဆုတ်ကပ်ဟု ရှေးသူဟောင်းတို့ ဆိုအပ်သော ဤခေတ်အခါကြီးတွင် ဘုန်းကြီးက ချဲဂဏန်းပေး၊ ဆရာလေးက ချဲရောင်း၊ ကျောင်းသားက ဘီယာစုတ်၊ ဘုတ်အုတ်ထက် ချက်တင်က အရေးပါ၊ ပညာထက် အသပြာကအင်အားကြီး၊ သစ္စာသမာဓိသည်လည်း ခွေးချီးလောက်ပင် အနံ့မသင်း၊ သိမ်ဖျင်းလှသည်ဖြစ်ရာ အမှားတစ်ရံသည် အမှန်တရားဟု ကိုယ့်တရားကိုယ် စီရင်ကြသူတွေချည်း ပြည့်နှက်နေပြန်သောကြောင့် ထုံးတို့မည့်စိတ်ကူးသည်လည်း လေထဲပင်မရောက်နိုင်ပြန်ချေ။ အကယ်တည့် သူတပါးကို ထုံးတို့ရပြန်လျှင်လည်း ကိုယ့်ပေါင်ကိုအရင်ထောင်း၍ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပင် အရင်ထုံးတို့သင့်သည်ဖြစ်ပြန်ရာ အသာယို့နေခြင်းက ပိုကောင်းအံ့ဟုပင် တွေးမိရပြန်ချေသည်။ သို့ပင်သော်ငြား မိမိပင် အမုန်းခံ၍ ထုံးမတို့ပြန်လျှင်လည်း လူစွမ်းကောင်းဟု အမည်လှလှပေးခံရမည့် လာလတ္တံ့သော လူမိုက်မရှိသည်ကို ဆင်ခြင်မိပြန်ချေရာ အသို့ပြုရချေအံ့ဟုလည်း စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်းကြီးစွာ ဖြစ်ရပြန်တော့သည်။
ပသို့ပင်ဆိုစေ ဘလော့ရွာဝယ်၊ ကျင်လည်ပါရင်း၊ လာသွားပြန်ကြည့်၊ သတိရှိစွာ၊ လေ့လာကျိုးကုတ်၊ ထုံးသုတ်ကြရင်း၊ အမှားကင်းအောင်၊ ကြံဆောင်လေက၊ ကောင်းလေစွဟု မဟာအကြံဖြစ်ပေါ်ပြန်လေသည်။ တစ်ယောက်အမှား၊ တစ်ယောက်နားမှာ၊ မခါးရအောင်၊ ရှေ့ဆောင်ထောက်ပြ၊ ကူညီရလျှင်၊ အလှထက်တွင်၊ အယဉ်ကိုဆင့်၊ ဘလော့မြင့်မည်ဟုလည်း စွဲစွဲမှတ်မှတ်၊ ယုံကြည်အပ်ပြန်ပါချေသည်တမုံ့။
အနှီမဟာဧရာမအကြံကြီးဖြင့် ဘလော့လည်ရင်း တွေ့တွေ့သမျှ ပို့စ်များကို ကြောင်ပုစွန်စား၊ ကြွတ်ကြွတ်ဝါးရင်း တစ်ပြားနှစ်ပြား၊ စုပါများ၊ ကုလားသူဌေးဖြစ်ဟူသော စေတနာဖြင့် တတ်သမျှ မှတ်သမျှ ပုရွက်ဆိတ်ဦးဏှောက်ဖြင့် မြင်သမျှ စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံအမှားဟူသမျှကို ဘလော့ဂါကြိုက်ခြင်းမကြိုက်ခြင်းကို အသာဘေးဖယ်၍ ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားကာ ဘကြီးနွားကို အလကားကျောင်းရင်း စာလုံးပေါင်းပြင်ခြင်းအလုပ်ကို စေတနာဗလပွနှင့် တတ်သလောက်လုပ်မိပြန်ချေတော့သည်။
စေတနာထုံးအိုးဖြင့် မည်းမည်းမြင်သမျှ တို့လတ္တံ့သော အနှီဦးဟန်ကြည်ကို မြင်သမျှဘလော့ဂါ၊ ဘလော့ဂီတို့သည် ဘလော့ခြင်း၊ မန့်သမျှကို ရီဂျက်ခြင်း မပြုသမျှ မိမိကိုအားပေးသည်ဟု တစ်ကြောင်းစွဲယူဆအပ်သည် ဖြစ်သောကြောင့် နောက်နောင်ကိုလည်း လူချင်းဆုံရန် အင်မတိအင်မတန် ခက်ခဲပေထသော ဤဘလော့နိုင်ငံကြီးတွင် ထုံးတစ်အိုးဖြင့် စေတနာစာတည်းအလုပ်ကို အဆဲခံနိုင်သမျှကာလပတ်လုံး အမုန်းခံလုပ်ရန် အားသန်မိပြန်ပါသတတ်။ အဆဲအဆိုခံနိုင်၊ တံတွေးထွေးခံနိုင်ခြင်းအရာ၌ ဘလော့နိုင်ငံမှ အကျင့်ရ၊ အရေထူလာပါက အပြင်လောကတွင်ပါ ထုံးအိုးတစ်လုံးဖြင့် လမ်းသလားရန်လည်း မဟာ့မဟာရည်ရွယ်ချက်ကြီးကို ဦးထိပ်တွင်ရွက်ထားမိပြန်ချေသည်။
သို့ပါသောကြောင့် သူတကာကို ထုံးမတို့ခင် မိမိကိုယ်ကို ဦးစွာထုံးတို့ထားခြင်းက လာလတ္တံ့သော ဘေးဘယာတို့ကို ကာကွယ်နိုင်အံ့ဟု အယူရှိပြန်လေရာ ၀ါးအံ့ဟုရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် လက်ထဲတွင်ကိုင်ထားသော ကွမ်းတစ်ယာကို အသာဖွင့်ပြီးလျှင် မိမိနဖူးကို ထုံးဖြင့် ပယ်ပယ်နယ်နယ် သုတ်လိုက်မိပြန်ချေသည်။ “အတွေးစလေးတွေ”ဟု အမည်သညာ ပေးအပ်သော မိမိ၏ မဖြစ်ညစ်ကျယ်ဘလော့မှာမူ ပထမပို့စ်ကို စမ်းတ၀ါးဝါးတင်အပ်သည့် အချိန်မှစ၍ ထုံးအိုးထဲတွင် နှစ်ထားလိုက်ပါသေကြောင့် ဖွေးဖွေးဖြူနေသည်ဖြစ်ရာ ချစ်စွာသော ဘလော့ဂါ၊ ဘလော့ဂီတို့သည် ထုံးတို့မည့်အကြံရှိပါချေက အသာနောက်ယို့ပြီးလျှင် မြင်သာထင်သာရှိစိမ့်သောငှာ ကတ္တရာစေးဖြင့်သာ တို့သင့်ပါကြောင့် မေတ္တာတော် ဗလပွဖြင့် အကြံကောင်းပေးအပ်ပါသတည်း။ ။
Posted by Han Kyi at 7:49:00 am
အမျိုးအစား : သရော်စာ
မောနင်းလို့ နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါရစေ ကိုဟန်ကြည်ရေ...မနေ့ည လာရောက်ခဲ့တယ်...ခမန့်မရေးဖြစ်လိုက်ဘူး...ဒီမနက်မှ တစ်ခါထပ်လာဖြစ်တယ်...ကျန်းမာရွှင်လန်း အေးချမ်းပါစေ...
15 May 2011 at 18:29
This post really makes me smile :)) love it. Thanks for sharing.
19 May 2011 at 17:17
လွမ်းရွက်မကြွေ . . .
ဆားပုလင်းဟန်ကြည်ရဲ့ တစ်ညနေ . . .
အမှိုက်ခြင်း . . .
ဦးဟန်ကြည်ရဲ့ နိုင်ငံရေး . . .
အခွင့်ပန် . . .